Diamond Champagne maka ọla dị ka mgbanaka, ọla ntị stud, mgbaaka, olu
Champlọ oriri na ọondụụ Champagne
Champagne diamond bụ otu n'ime ọtụtụ ihe eji eme diamond na ọla, a na-etinye ya dịka mgbaaka, ọla aka stud, mgbaaka, olu ma ọ bụ ihe dị mma. A na-edozigharị diamond na-acha edo edo ka ọ bụrụ ọla edo itinye aka na mgbaaka ma ọ bụ mgbaaka agbamakwụkwọ dị ka naanị okwu.
Diamond bụ ezigbo carbon nke carbon elementrị ya nwere atom ndị edobere na kristal nke akpọrọ diamond cubic. N'ime ụlọ na ọnọdụ nrụgide, ụdị carbon ọzọ siri ike nke a maara dị ka eserese bụ n'ụdị kemịkalụ ahụ, mana diamond anaghị atụgharị na ya. Diamond nwere ike kachasị elu na akụrụngwa akụrụngwa nke ihe okike ọ bụla, ihe ndị a na-etinye n'ọrụ na ngwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị ka ịkpụ na ịme ihe. Ha bụkwa ihe kpatara na mkpụrụ ndụ anụ diamond nwere ike idobe ihe ndị ga-eme ka nrụgide dị omimi n'ụwa.
Ọtụtụ ola diamond nwere ebighi ebi nwere afọ n’agbata 1 ijeri na afọ 3.5. A kpụrụ ọtụtụ n'ime omimi dị n'agbata kilomita 150 na 250 na mbara ala ,wa, ọ bụ ezie ole na ole siri ike site na 800km. N'okpuru nrụgide dị elu na ọnọdụ okpomọkụ, mmiri nwere carbon gbazere mineral ma jiri diamonds dochie ha. N’oge na-adịbeghị anya, eburu ha n’elu ugwu na mgbawa ugwu ma dọba n’elu okwute ndị mara dị ka kimberlites na lamproites.
Nitrogen bụ ihe dịkarịsịrị ọcha a na-ahụkarị na diamonds bara nnukwu uru ma ọ bụ na-ahụ maka agba odo na agba aja aja na diamonds.
Enwere ike ime ka olabụ dị na carbon dị ka carbon dị ọcha n’okpuru nrụgide na ọnọdụ okpomọkụ ma ọ bụ site na ikuku hydrocarbon site na itinye uchu ikuku. A pụkwara iji ọla ndị na-emitomi mee ihe dịka ọla edo zirconia na silicon carbide. A na-ahụkarị okike, sịntetik na iitationomi diamond site na iji usoro ngwa anya ma ọ bụ tụọ ihe omume eletrik.
Zụrụ ola diamond na ụlọ ahịa anyị
Anyị na-eji ọla edo ọla ọcha na-eme ọla edo dị ka mgbanaka, ọla ntị Studio, mgbaaka, olu ma ọ bụ Pendant. A na-edozigharị diamond na-acha edo edo ka ọ bụrụ ọla edo itinye aka na mgbaaka ma ọ bụ mgbaaka agbamakwụkwọ